!! #သစ်ခိုးထုတ်မှုဖြင့် #တရားစွဲခံထားရသော #တရုတ်နိုင်ငံသားအချို့ | democracy for burma
!! #သစ်ခိုးထုတ်မှုဖြင့် #တရားစွဲခံထားရသော #တရုတ်နိုင်ငံသားအချို့
tags: Burma, china, illegal logging, Myanmar, Myitkyina court
သစ်ခိုးထုတ်မှုဖြင့် တရားစွဲခံထားရသော တရုတ်နိုင်ငံသားအချို့ ထောင်ဒဏ်တစ်သက်တစ်ကျွန်းကျ ”
သစ်ခိုးထုတ်မူဖြင့်တရားစွဲခံရသော တရုတ်နိုင်ငံသား ၁၅၀ ကျော်အနက် ၈၅ ဦးကို ယနေ့ (ဇူလိုင်-၂၂)နံနက်က မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်တရားရုံးတွင် အမိန့်ချမှတ်လိုက်သည်။
၈၃ ဦးကို ထောင်ဒဏ်တစ်သက်တစ်ကျွန်းကျခံရန် အမိန့်ချလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပြီး ကျန် နှစ်ဦးမှာမူ အရွယ်မရောက်သေးများ ဖြစ်နေ၍ ထောင်ဒဏ်ဆယ်နှစ်ချမှတ်လိုက်ကြောင်း မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်တရားရုံးသို့ရောက်ရှိနေသည့် ဝိုင်းမော်မြို့နယ်သတင်းတပ်ဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကပြောသည်။
အမိန့်ချရန် ကျန်ရှိနေသေးသည့်သူများကိုမူ ညနေပိုင်းတွင် ဆက်လက်အမိန့်ချမှတ်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
နောက်ဆက်တွဲ သတင်း=> သစ်ခိုးထုတ်မူတွင်ပါဝင်သူ ကျန်တရုတ်နိုင်ငံသား ၇၀ ကိုလည်း တစ်သက်တစ်ကျွန်းပြစ်ဒဏ် ထပ်မံချမှတ်လိုက်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံသား ၁၅၅ ယောက်အနက် ၁၅၃ ယောက်မှာ တစ်သက်တစ်ကျွန်း ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရပြီး နှစ်ယောက်မှာ ဆယ်နှစ် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရခြင်းဖြစ်သည်။ cr-7Day News Journal
from → သစ်ခိုးထုတ်မှုဖြင့် တရားစွဲခံထားရသော တရုတ်နိုင်ငံသားအချို့, Burma, china, MYANMAR, Myitkyina court
← !! #MOI #ကေအိုင်အေအဖွဲ့မှ #ဆက်ကြေးတောင်းပြီး #အသံမိုင်းဖြင့် ဖောက်ခွဲခြိမ်းခြောက်မှုပြုလုပ်
#Burma #Chinese #charged #illegal #logging, some of sentenced to life “ →